Dalku Jar Buu Ka Lushaa Ee Yaa U Cid Ah?. Q.2aad- W/Q: Xuseen Xasan Bad-maax | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dalku Jar Buu Ka Lushaa Ee Yaa U Cid Ah?. Q.2aad- W/Q: Xuseen Xasan Bad-maax
Anigoo ka duulaya dhaqamada cusub ee dalka ka jira waxaan ka afeefanayaa qormadan ulama jeedo cid gaar ah,ulamana jeedo kooxo gaar ah balse waxa qalbigayga guba oo aragtidayda damqa hab-dhaqanka siyaasadeed ee dalkan lagu hogaaminaayay tan iyo intii aynu gooni isu taagnay.
Hadaan ka sii amba qaado kobtii aan ku joojiyay qaybtii hore mar haday marin habaabintii fulintu saamayn ku yeelatay qaabkii dhismaha iyo ku-dhaqankii dimuqraadiyada ee xisbiyada qaranka iyana waxay ku saloobeen beelo,tanina waxay keentay inay xisbiyadiina adeegsadaan beelaha oo kalsoonidii loo qabay luntay.Halkaas ayaynu ku aasnay kobcintii dimuqraadiyada iyo ku dhaqankii dastuurka iyo xeerarka dalka u yaal.Waataa shirarka beelahu lagu qabanayo degaan walba.Halkaa waxaynu ku gawracnay qaabkii dawladnimo.Mana shaqaynayso dawladii beelo la’aan maanta.Waxaana lumay kalsoonidii loo hayay xukuumada.Shacabkii ku dhiiran lahaa isbedel waa kaa u kala baxay beelaha ee ka mashquulay la xisaabtankii dawlada iyo wakiilada codkooda ku fadhiya. Hadaba maxaa u sabab ah inay inaga qaloocato dawladnimadii? Aragtidayda gaabani waxay ii tilmaamaysaa:
1.Siyaasiyiintii dugsiga siyaasada ee hore oo weli hogaanka dalka isu bedelaysa.
2.Siyaasadooda oo ku fadhida qaybi oo xukun.
3.Beelaha oo ku tartamaya waa markayagii.
4.Beelaha oo beel kastaaba ku kalsoontahay siyaasigooda hore.
Maxaa lagaga baxayaa xaaladan dib inoogu celisay beelaha?
1.Shacabku waa inuu miyirsadaa oo Allaah loo noqdo.
2.Qof wal oo dalkan u dhashay waa inuu daljirnimada ka horaysiiyaa qabiilka.
3.Shacabku waa inuu bartaa codkoodu inuu yahay ka dalka dumin kara ama cadaalad
Ku hogaamin kara.
4.Shacabku waa inuu isbedel ku sameeyaa qaabka xulashada wakiilada iyo degaanka
oo loo bedelaa qaabka degmo(County).
1.Xisbiyada qaranku waa inay gudahooda ku sameeyaan isbedel dhab ah:
b) waa inay keenaan hab-siyaasadeed cusub oo xaqiijiya jiritaanka dalkan.
t) waa inay toosiyaan hab-dhaqanka maamul ee gudahooda.
j) waa inay xaqiijiyaan ku dhaqanka xeerarkooda iyo kuwa qarankaba.
x) waa in xisbiyada dhexdooda laga curiyaa lagagana dhabeeyaa ku-dhaqanka
dimuqraadiyada,si loo helo talo wadaag.
Kh)Xubnaha xisbiyadu waa u meel dayaan xulashada musharaxiinta hogaaminta dalka
si loo helo hogaamiyayaal cadaalad dalka ka curiya cadaalad,kana saari kara hab-
beeleedka,nin jeclaysiga iyo keli-talisnimada dalka ku caan baaxday 25ka gu’.
Waxaan ku soo afjarayaa dadkaygoow dhab u ogaada inaynu jid qaldan hayno,ogaada dawlad xumi ama wanaagsani inay ka timaado ugu horayn shacabka iyo hab-dhaqanka xisbiyada qaranka. Tolaayeey dawladnimo wax kama tarto inay kala tuurto mooyee…toosiya xaajada kana dhawra xajiimaha qabyaalada.